ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ကျောင်းသားတွေကသာ စတင်အကြမ်းဖက်ခဲ့တာလို့ ရဲမှူးကြီးပြော
အာဏာရှင် တွေမှာ ဒီတစ်နည်း ပဲ ရွေးစရာလမ်းရှိတယ်။ ရန်ကုန် အထိ လွှတ်ပေးလိုက်ရင် ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် သူတို့ပြုတ်သွားမှာ အစိုးရိမ် လွန်တယ်။ ဒီလို ဖန်တီးပြီး ဖြိုခွင်း လိုက်ရင် အနည်းဆုံးတော့ ၂၀၁၅ အထိ ခံအုံး မယ် လို့သူတို့ အစိုးရိမ် လွန်ပြီး လုပ်တာ။
Mar 15, 2015 08:29 PM
Lu Hman နေရပ်- Myanmar :
အဲဒါဆိုရင် ၄ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ဂတိ ကို စဖျက်တာဘယ်သူလဲ။ ှဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေကို ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ် အစာရေစာဖြတ် ဖြတ် ၄ ဖြတ်ပုံစံ လုပ်တာ ဘယ်သူလဲ။
ကျောင်းသား ဆိုတာ ပြည်သူတစ်ရပ် လုံးရဲ့ သားသမီး မိဘတွေ ဝန်းရံ တော့ကော ကိုယ်မှန်ရင် ဘာကြောစရာလဲ။ ကိုယ် ကိုယ်ဍ်က မူမမှန် လို့ပေါ့။ နောက်က ကြိုးကိုင် လို့ဘာလို့ သောက်ရှက် မရှိ လျှာ အရိုးမရှိ အမြဲတန်း ပြောနေတယ်။
Mar 15, 2015 09:27 AM
Mar 15, 2015 03:11 AM
hi, stupid guy.are u the son of chief police? everyone can see that what happened.
Mar 15, 2015 03:08 AM
အရူးစကား နေရပ်- ထူးမျခား :
စစ်အစိုးရလက်ထက် TV ဖျော်ဖြေမှု မှာ “ပေါင်ချိန်(တရုတ်တရားသူကြီး)- ဗြောင်လိမ်(မြန်မာသတင်း)- ရှောင်လိန်(တရုတ်သိုင်းကား)” ဆိုစမှတ်ပြုခဲ့ရပါတယ်။
Mar 15, 2015 12:13 AM
“ဥရောပသမဂ္ဂ EU က သင်တန်းပို့ချတဲ့နည်းတွေ” ထဲမှာ လူမိုက်၊ ထောင်ထွက်၊ ယူနီဖောင်းချွတ်စစ်သားတွေကို လက်ပတ်နီ ပတ်ခိုင်းပြီး ရဲရှေ့ကနေ ရိုက်ခိုင်းတဲ့နည်း ပါ ပါသလား။
ဒါက “ကြက် ရေထိုး“တဲ့နည်းပါ။ EU သင်တန်းထဲကနည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ြ့မန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျောင်းသားများကိုသာ အကြမ်းဖက်ဖြိုးခွဲခဲ့ဒါပါ ကွပ်ကဲတာဝန်ရှိသူများ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပြောနေကြအတိုင်း တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှုရှိရပါမည် ။ မုန်လာဥမလုပ်ပါနဲ့ ရဲမှုးကြီးရယ် ။
Mar 14, 2015 09:26 PM
Shwe Kyay နေရပ်- Myanmar :
ရဲတွေဟာ ဘယ်လောက် အကြမ်းဖက်ဆန်လဲဆိုတော့ ဖမ်းမိပြီးသားလူ ကို ဝိုင်းရိုက်တာတို့ လဲနေတဲ့လူကို အလွယ်တကူ ဖမ်းနိုင်ရဲ့သားနဲ့ ဝိုင်းရိုက်တာတို့ လူနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကားတွေ လူနာတင် ယာဉ် တွေကို ဖျက်ဆီးတာတို့ ဆိုတာ ဆန္ဒပြသူတွေ ကို ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းက ဖြို ခွင်းတဲ့ ပုံစံ မဟုတ်ပဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေ လုပ်ရပ်နဲ့ တူနေတယ်။ အဲဒါ ကို ထိမ်းသိမ်းမဲ့လူလဲ မရှိဘူး။ အမှန်တရား ကိုမြတ်နိုးသူ သည် မိမိ ကိုယ်တိုင် ပထမ မှန်ကန်ရမည်။ ပြည်သူလူထု ကို ဥပဒေ နဲ့ အညီ နေစေလိုရင် ရဲတွေ ကိုယ်တိုင် ပထမ ဥပဒေ အညီ ကျင့်ကြံ ရမည်။ ဗိုလ်ရဲထွဠ် ဟာ ဒါတွေ ကို လစ်လျူရှု ပြီး သူတို့ ပဲ အမြဲတန်း မှန်တယ် လို့ပြောပြောနေတာ ဒီရာထူး နဲ့မတန်ဘူး။
Mar 14, 2015 08:13 PM
The authorities are so quiet to explain the disturbances in details that they are assumed to admit guilt.
ရဲ ပြီပြီ ပြောင် လိမ်တယ် သတင်းသမားတွေ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယို တွေမှာ လူနာတင်ယာဉ်ထဲ ကနေ ဖမ်းခေါ်လာတဲ့ ကျောင်းသားကို ရဲ ၄/၅ ယောက်က ချုပ် ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ အဝေးက ရဲတစ်ယောက် ကပြေးလာပြီး ကရာတေး ကန် ဆောင့်ကန်တာ ရဲ ၄/၅ ယောက်လောက် ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားကို ရဲ ကဝိုင်းရိုက်တာ ကားကို အကြမ်းဖက် သမားတွေ ပုံစံ ဖျက်ဆီးတာ ....စသည်ဖြင့် မှတ်တမ်းရှိနေတာပဲ။
Mar 14, 2015 07:59 PM
ြ့မန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှကျာင်းသားများကိုသာအကြမ်းဖက်ဖြိုးခွဲခဲ့ဒါပါကွပ်ကဲတာဝန်ရှိသူများနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပြောနေကြအတိုင်းတာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှုရှိရပါမည် မုန်လာဥမလုပ်ပါနဲ့ ရဲမှုးကြီးရယ်
Mar 14, 2015 01:56 PM